ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးအခြေခံအဆောက်အအုံများဘူတာတိုးချဲ့မှုအလုပ်လုပ် Savastepe ပိုင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပင်လယ်ပြင်အားဖြင့်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အဆိုပါလိုင်းTekirdağ-Muratlıရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကိုတွေ့ »
Savastepe ၏ဘူတာလမ်းမကြီးအခြေခံအဆောက်အအုံအလုပ်လုပ်ပိုင်ဆိုင်မှ extension
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဒေသန္တရ SERVICE ကိုရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL
ဘူတာတိုးချဲ့လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Savastepe ပိုင်ဆိုင်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 392260
က) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131 - 2324647798
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.go
36.500 ၏ Mxnumx တူးဖော်,3အကျင့်ကိုကျင့်ဖြည့်ဆည်း mxnumx, 6600 ဆောက်လုပ်ရေးကိုပိုကျသည်, ရေနုတ်မြောင်းငါ့ကို 3, 600 မီတာကျောက်ရိုးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်
ခ) Place: Savastepe / BALIKESİR
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 150: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
က) Place: Atatürk CAD ။ အမှတ် 121 / Alsancak / IZMIR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 17.09.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တိုးချဲ့မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Ilic Peronbej ဘူတာကိုလယ်ဘူတာရုံလမ်းမကြီး Walking 17 / 05 / 2018 Making နှင့် Ilic Peronbej ဘူတာတိုးချဲ့မှုအလုပ်လုပ်သံသယ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအောင်လိမ့်မည်သည့် Fields ဘူတာလမ်းမကြီး Walking ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Cetinkaya, Şarkışla, Karagöl, Divriğiအဲရစ်, Kemah, Alba, Tanyeri, Demirkapı, သန္တာ, Çadırkayaပြီးတော့Aşkaleဘူတာကိုလယ်လမ်းမကြီး Walking 4734 ၏အလုပ် 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Ilic ဘူတာ Peronbej တိုးချဲ့မှုစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေး အပိုဒ်အားဖြင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 232466 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လိုင်းတိုးချဲ့ Karaosman ၏တူရကီ-Kayseri လမ်းဘူတာ 11 / 11 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏လိုင်းတိုးချဲ့ Karaosman TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏တူရကီ-Kayseri လမ်းဘူတာ။ ယိမျးမယို၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်လိုင်းတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Karaosman အမှတ် 4734 19 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တူရကီ-Kayseri လမ်းဘူတာများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 116612 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mehmethanifiogut@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောအင်တာနက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်မှတ်တမ်း လိပ်စာ: က) အရည်အသွေး၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်, ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Esme လမ်းဘူတာ၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု 23 / 03 / 2018 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ Esme လမ်းဘူတာအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)3၏ပြည်နယ်မီးရထား၏လုပ်ငန်း၏ extension ။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် STOCK CONTROL ZONE SERVICE ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးEŞME STATION ကိုလမ်း EXTENSION ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်တံ့။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 127242 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131 - 2324647798 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: mxnumx@outlook.co ငါ d) ကိုတင်ဒါအင်တာနက်မှတ်တမ်းမြင်နိုင်ပါသည် လိပ်စာ: နုမှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 309 ရာတွင်ဘာသာရပ် ...
Manisa-Dumlupýnarလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာလမ်းမကြီးလုပ်ငန်းခွင်နားမှာလေလံရလဒ်တိုးချဲ့ပြုခံရဖို့ 28 / 06 / 2018 Manisa-Dumlupýnarလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာလမ်းမကြီးတွင်မှ 2018 ကုမ္ပဏီများမှဆိုရင် single သက်တမ်းတိုးရေးအားဖြင့်လမ်း Making 225819 £ Manisa-Dumlupýnarလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. ကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) 45.033.436,40 / 62.845.328,32 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 17 TL ၏ Making လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်များ၏ဘေးထွက်သက်တမ်းတိုးရေးနှင့်ပြီ နုအဆိုပြုချက်ကိုနှုန်း 46.945.662,30 နှင့်UĞURSALလျှပ်စစ်စွမ်းအားပေးပါ။ INS ။ ပစ္စည်းများ။ KIRTI ။ Med ။ MOB ။ BEYER ။ peer ။ SAN ။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က + Baytimur တည်ဆောက်နေ INC သူကဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ နုလေလံပါဝင်4ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, အနုပညာအဆောက်အဦများ 22950 မီတာရထားလမ်း, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ပြုမှကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အကိုင် superstructure ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Split ဆင်ခြေလျှောအစီအစဉ်မှာတော့လုပ်ပါလိမ့်မည် (Manisa နှင့်ကီလိုမီတာအကြားBalıkesir Banda-Savastepe လိုင်း: 196 800 နှင့် 198 + Split 600 အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်) 31 / 03 / 2017 TC လျှောစောက်ပိုင်းခြားအစီအစဉ် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ REGION ယိမျးမယိုညွှန်ကြားရေးမှူး Manisa Banda-လိုင်းSavaştepe-Balikesir မိုင်အကွာအဝေးကိုချိုး: 196 + 800 နှင့် Split 198 Slope အစီအစဉ်မှာတွေ့ရှိ 600 + စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် Making ကပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 138527 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
Savastepe ဘူတာလမ်းများ, Savastepe ဘူတာလမ်း elongated, TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
TCDD İzmir3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
Mimar Sinan ရပ်ကွက်Atatürk Caddesi ဗိုလ်မှူး Fazil Square ကိုအမှတ် 121 / 35220 Alsancak အပေါ်
Izmir, Izmir 35220 Türkiye + Google Maps ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တိုးချဲ့မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Ilic Peronbej ဘူတာကိုလယ်ဘူတာရုံလမ်းမကြီး Walking
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လိုင်းတိုးချဲ့ Karaosman ၏တူရကီ-Kayseri လမ်းဘူတာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Esme လမ်းဘူတာ၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Split ဆင်ခြေလျှောအစီအစဉ်မှာတော့လုပ်ပါလိမ့်မည် (Manisa နှင့်ကီလိုမီတာအကြားBalıkesir Banda-Savastepe လိုင်း: 196 800 နှင့် 198 + Split 600 အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်)
ဘေးလ်-İvrindiပြည်နယ်အဝေးပြေးပျောက်ဆုံးကမ္ဘာမြေ Works, အနုပညာ structures များ, တံတားလုပ်ငန်းများနဲ့ Track အလုပ်လုပ်ယောဘသည်ကျန်ရှိသော
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လိုင်းဘူတာ Caferli ၏တူရကီ-Kayseri လမ်းမကြီးတိုးချဲ့မှု
Selim Koçbay Savastepe - Browse ကို Sogucak လေ့လာရေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းအိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ကြ